Kitra – «Telma coupe de Mada» : nahatafita ekipa telo Analamanga | NewsMada
Kitra – «Telma coupe de Mada» : nahatafita ekipa telo Analamanga
Tontosa ny faran’ny herinandro lasa teo, ny lalao savaranonando amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara «Telma coupe de Mada 2016». Ekipa telo tamin’ireo valo niatrika izany dingana izany no tafita ho an’ny ligin’Analamanga. Anisan’izany ny Santos FC, nanilika ny FC Tana, tamin’ny isa mazava 5 noho 2. Teo koa ny nahatafakatra ny DSA Atsimondrano, tamin’ny isa tokana 1 noho 0, nanoloana ny FC Zam Bongolava. Nandresy tsy niady kosa ny MI 20 raha tokony hifandona tamin’ny Zanakala FC avy any Matsiatra Ambony.
Nahatafita ekipa 3 toa izany koa ry zareo avy any Atsinanana. Mbola manohy ny lalany ny Ascoimi Mahanoro, nandresy ny Tana 3 Analamanga, tamin’ny isa 4 noho 0. Mbola tamin’io isa io ihany koa ny nandresen’ny SMMC ny FC Ravinala ary tamin’ny isa 2 noho 0 ny nanilihan’ny Piment Vert ny Fenerive Est SC Analanjirofo.
Ankoatra izay, mbola manana solontena tafita ihany koa US Douanes sy Fomela Club, avy amin’ny ligin’i Matsiatra Ambony. Toraka izany koa ny ligin’i Diana, amin’ny alalan’ny MCA Ambilobe sy FC Metal.
Averina amin’ny alahady 14 aogositra ho avy izao kosa ny fihaonana eo amin’ny Bemiray Sofia sy ny FC DS Diana.
Hiditra amin’ny lalao ampaha-32-n-dalana ireo tafakatra. Fihaonana hatao ny 28 aogositra ho avy izao. Hiditra an-tsehatra amin’io koa ny Cnaps Sport, tompon’ny amboara farany, miampy ireo ekipa tsara toerana nandritra ny taom-pilalaovana 2015.